ऐतिहासिक स्थलः बाराको सिम्रौनगढ - News Today
भउच प्रसाद यादव
मानव अतितलाई छातीमा समेटेर ऐतिहासिक धरोहरलाई सुरक्षित राखेको छ सिम्रौनगढ, जसलाई खुल्ला इतिहास, कला संस्कृतिको संग्रहालयको रुपमा लिन सकिन्छ । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्व बोकेको सिम्रौनगढ अहिले नेपालको राजनीतिक भूगोलमा मध्य नेपालको नारायणी अंचल, बारा जिल्लामा पर्दछ । बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयाबाट २० किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा रहेको सिम्रौनगढ पूर्व पश्चिम ४.५ कि मि, उत्तर दक्षिण ६.५ किलोमिटरमा फौलिएको छ । समुन्द्री सतह देखि ३०० देखि ५०० मिटरको औसत उचाईमा रहेको यो ठाउँ करीब २६ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । विश्व मानचिमा यो क्षेत्र २५.५५ पूर्व पश्चिम अक्षांश र ८५.१० उत्तरदक्षिण देशान्तरमा रहेको छ । ९ गाउँ विकास समिति र २० गाउँमा फैलिएको सिम्रौनगढको दक्षिणमा भारतको बिहार राज्यको पूर्वी चम्पारण , पूर्वमा रौतहट, उत्तरमा मकवानपुर र पश्चिममा पर्सा जिल्ला पर्दछ ।
सिम्रौनगढकोे स्थापना उपनिषद्काल र पौराणिक कालमा हिन्दू संस्कृतिको केन्द्रको रुपमा प्रख्यात प्राचीन विदेह वा मिथिला क्षेत्रमा भएको हो । लामो समयको अन्तरालपछि सन् १०९७ मा कर्नाटकवंशी राजा चालुक्यका सेनापति नान्यदेवले मिथिलामाथि विजय गरी सिमलको वनलाई राजधानी बनाए । जसलाई आज सिम्रौनगढ भनिन्छ ।
सिम्रौनगढको सम्बन्ध सिमलको वनसंग रहेको तथ्य नेपालमा प्राप्त सबभन्दा पुरानो वंशावली ‘गोपालर वंशावलीले’ प्रष्ट्याएको छ । सो वंशावलीमा यस स्थललाई ‘सिमरावनगढ’ भनी उल्लेख छ, जसको अर्थ हुन्छ ‘सिमलको वनमा रहेको किल्ला’ । सिमलको वन रहेको यो क्षेत्र सिमारावनगढबाट अपभं्रश हँुदै सिम्रौनगढ भएको देखिन्छ । सन् १७३९ देखि १७५४ सम्म काठमाडौ उपत्यकामा आउने जाने गरेका इटालियन पादरी क्यासियानोले ‘सिमानागढ’ भन्ने शब्द उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
तिरहुतका अन्तिम राजा हरिसिंहदेवको पालामा अर्थात् सन् १३२६मा दिल्लीका बादशाह गयासुद्धिन तुकलकले सिम्रौनगढलाई ध्वस्त परेपछि राजा र भारदारहरु उत्तरतिर लागे । राजा हरिसिंहदेव काठमाडौ उपत्यका प्रवेश गर्ने क्रममा सिन्धुलीको तीनपाटन भन्ने ठाँउमा उहाँको मृत्यु भयो । उहाँको मृत्युपछि रानी देवलदेवी (उनको माइती काठमाडौ खाल्डोमा थियो) र राजकुमार ‘जगतसिंह’ लगायत राजपरिवारका सदस्यले भक्तपुर राजदरवारमा शरण लिए । त्यसपछि नेपाल उपत्यकाको मल्ल वंशमा कर्नाटकवंशीको प्रभाव देखिन थालियो । राजकुमार जगतसिंह नेपाल उपत्यका आउँदा सिम्रौनगढ राजपरिवारका कुलदेवी तलेजु भवानीलाई लिएर आए । पछि तलेजु भवानीको स्थापना नेपाल उपत्यकामा भयो । आज उपत्यकामा तलेजु भवानीको भव्य मन्दिर छ । यसरी काठमाडौ उपत्यका र सिम्रौनगढबीच धार्मिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्ध पुरानो र प्रगाढ रहेको स्पष्ट हुन्छ । हरिसिंहदेवको पतनपछि गयासुद्दिन तुगलकका प्रतिनिधिले मिथिलाको राजधानी सिम्रौनगढबाट भारतको दरभंगामा सारे । मिथिलाको नाम तुगलकावाद राखी दरभंगाबाट शासन संचालन गरियो । आजपनि दरभंगालाई तुगलकावाद पनि भन्ने गरिन्छ । पछि नियमित कर तिर्नुृ पर्ने गरी स्थानीय कामेश्वर ठाकुरलाई राज्य संचालनको जिम्मा दिइयो । ठाकुरले सन् १५२६ सम्म सत्ता संचालन गरेको देखिन्छ ।
सिम्रौनगढको साँस्कृतिक सम्पदाको दोश्रो स्थानमा यहाँका मन्दिरहरुलाई लिन सकिन्छ । सिम्रौनगढको बीच भागमा स्थापना गरिएको कंकाली मन्दिर ईटद्वारा निर्माण गरिएको शिखर शैलीमा छ । मन्दिर चारैतिर चतुष्कोणाकारको भवनको बीचमा शिखर उठेर माथिसम्म चुलिएको छ । मन्दिरको चारैतिर खुल्ला गुम्बजाकारको प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको छ । मन्दिरभित्र १२० से.मि. को अग्लो मंच बनाइएको छ जसमाथि पूर्वतिर फर्काएर कंकालीको मूर्ति प्रतिष्ठापित गरिएको छ । सम्पूर्ण भाग ईटबाट निर्मित यस मन्दिरको गाह्रो ७५ से.मि. चाक्लो छ । मन्दिरको दलिनमा विभिन्न चित्रहरु बनाइएको छ । यस मन्दिरको निर्माण मान्साराम बाबाले सन् १८१६ भन्दा अगाडि नै सानो आकारमा गरेक थिए । पछि उनका चेला रामसेवक दासले सन् १९६७ अहिलेको मन्दिर निर्माण गरेका थिए ।
मूल मन्दिर भने तीन तहको पेटिमाथि बनेको छ जसको चारैतिर खुल्ला प्रदक्षिणा भाग छ । मन्दिरभित्र राम, सीता र लक्ष्मणका धातुका प्रतिमाहरु प्रतिष्ठापित छन् । अगाडि जंगबहादुर, हिरण्यकुमारी लगायत परिवारका सदस्यहरुको प्रतिमा रहेका छन् । मन्दिरको प्राङ्गण वरिपरि दुई तल्लामा चतुष्कोणाकारका धर्मशाला बनेका छन् । मन्दिर निर्माणमा त्यहाँका भग्नावशेषहरु प्रयोग भएको देखिन्छ । मर्मत सम्भारको अभावमा अहिले मन्दिर जीर्ण बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।
समग्र मिथिलाको कला संस्कृतिको परिचय दिन सफल यहाँका मूर्तिहरु संरक्षणको अभावमा लोप हुने अवस्थामा छन् । मुस्लमानी आक्रमणमा यहाँका अधिकांश मूर्तिहरुको अंगभंग गरी आस्तित्व समाप्त गरियो । बचेखुचेका मूर्तिहरुको पनि चोरी हुने र हराउने क्रम जारी छ । केही बर्ष अगाडि पुरातत्व विभागको सक्रियतामा कंकाली मन्दिर परिसरका मूर्तिहरुलाई मन्दिर परिसरमै घर बनाई संग्रहित गरिएको छ । त्यसैगरी, सिम्रौनगढका केही मूर्ति र दरबारका अवशेषलाई राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनीमा संग्रहित गरिएको छ । राष्ट्रिय संग्रहालयमा सिंहबाहिनी दुर्गा, सप्तअश्वरथ सवार सूर्यमूर्ति र ब्रम्हाको मूर्ति संरक्षित छ । सिम्रौनगढको तोरणद्धारको टुक्रा संग्रहालयको भित्री गेटमै राखिएको छ ।
Previous : वैज्ञानिकले बनाए हावाको तरंगबाट विजुली निकाल्ने प्रविधि
Next : हिंसक आन्दोलनको प्रतिकारः राजन